Ra’iisul Wasaare Sharma’arke “Aduunka Waa In uu Ku Eegaa Soomaaliya Indha Ka Duwan Kuwii Hore” | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Ra’iisul Wasaare Sharma’arke “Aduunka Waa In uu Ku Eegaa Soomaaliya Indha Ka...
Ra’iisul Wasaare Sharma’arke “Aduunka Waa In uu Ku Eegaa Soomaaliya Indha Ka Duwan Kuwii Hore”
DOOXA, Qatar: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa wareysi dhinacya badan taabanaya siiyay Telefishinka Al Jazeera, qaybtiisa Afka English-ka.
Wareysigan ayaa lagu waydiiyay Ra’iisul Wasaare Sharma’arke dadaalka uu ugu jiro in Soomaaliya ay hesho maalgelin shisheeye, sida uu u badali karo sawirka khaldan ee dalalka shisheeye ay ka haystaan Soomaaliya iyo suuragalnimada inuu miiska wadahadalka la fariisto Al Shabaab. Wareysiga ayaa u dhacan sidatan;
Al Jazeera: Maxaad ka qabaneysaa dalka Qatar?
Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke: Soomaaliya in lala simo waxyaabo gurracan sida burcad-badeednimo iyo argagixisanimo way dhamaatay. Hadda dalku waxa uu diyaar u yahay ganacsi. Waxaan soo dhaweyneynaa cid walba oo dooneysa in ay maalgashi ku sameyso. Ugu dambeyn, kobcinta dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada ayaa dhalinyaro badan ka saari karta faqriga. Waxaannu dawladda Qatar kala hadalnay bal sida ay u maalgashan karto dalka Soomaaliya.
AJ: Waxaad tiri Soomaaliya sawir xun ayaa laga haystaa sida amniga, burcad-badeednimada, Al Shabaab iwm. Ma u maleynaysaa in waxyaabahaasi ay carqaladeyn karaan maalgashiga? Sideese dadka maalgashnaya ugu kalsoonaan karaan Soomaaliya?
Sharmarke: Waxaan filayaa in ay Soomaaliya tahay dalka ugu horreeya ee hoos u dhac weyn uu ku yimid dhanka argagixisada dhawrkii sano ee u dambeeyay marka lala barbardhigo meelo badan oo arrintan ay aad uga socoto. Sidaa darteed, Soomaaliya waa dal aan dayacneyn oo si tartiib tartiib ah dhibaatadaas uga gudbaya.
AJ: Xalay Pentagon-ka wuxuu sii daayay war uu ku sheegay in ay diyaaradaha duuliye la’aaanta ah ku dileen hogaamiye al-Shabaab ah oo la yiraahdo Aadan Garaar. Waxa ay sheegeen inuu ninkaasi ahaa isku dubaridihii weerarkii suuqa Westage ee Kenya. Maxaa saameyn ah oo uu weerarkaasi keeni karaa?
Sharma’arke: Ma jirto meel kamid ah Soomaaliya oo argagixisada gabbaad u noqon kara. Qof walba oo fal-dambiyeed geysta waa in la ciqabaa. Dawladda Mareykanka waxa ay nagala shaqeysaa burburinta iyo hakinta falalka ay argagixisadu ka wado Soomaaliya. Dhawrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa la dilay hogaamiyayaal sarsare oo al-Shabaab ah. Taasi waxa ay ka dhigantahay in awoodooda la wiiqay. Xitaa qaar ayaa kasoo goosanaya oo dawladda isu soo dhiibaya oo ay ku jiraan saraakiil sarsare. Waxaa jirta cafis guud oo loo fidiyey qofkii ka waantowda qaska. Waxaan diyaar u nahay inaan la heshiinno oo aan soo dhaweyno.
AJ: Kawarran diyaaradaha duuliye la’aanta ah? Diyaaradahan Mareykanka leeyahay duqeyntooda shacabka aad bey uga soo horjeedaan sababtoo ah waxay leeyihiin khasaaraha dhimasho ee ka dhasha waa wax ku dhaca intiisa badan shacabka. Taasi soo dhibaato Soomaaliya ma aha?
Sharma’arke: Diyaaradahan waxaa lagu dilay hogaamiyayaal muhiim ah oo Al Shabaab ka tirsan. Soomaaliya iyo Mareykanka ayaana iska kaashanaya arrintaas.
AJ: Ma shaqeynaysaa cafiska guud ee aad u fidiseen xubnaha Al Shabaab ka tirsan? Meeqa ayaa ilaa iyo hadda dalabkaa ka faa’iideystay?
Sharmarke: Qaar badan ayaa dalabkaas ka faa’iideystay. Rag sarsare ayaa isa soo dhiibay, dawladda ayaana gacanta ku heysa. Waxaan diyaar u nahay inaan sii wadno si aan carruurteena loogu sirin inay ku kacaan falalka noocan oo kale ah.
AJ: Maxaad ku leedahay dadka leh waa in maxkamad la horgeeyaa dadkan isa soo dhiibaya?
Sharmarke: Waxaan filayaa qof walba oo joojiya qaska iyo fawdada, diyaarna u ah inuu bulshadiisa dhinac ka raaco, mar kale waxaannu sineynaa fursad.
AJ: Makuu muuqataa maalin aad miis qura wada fariisataan Al Shabaab oo aad la hadasho?
Sharmarke: Waxaan rajeynayaa in ay joojiyaan fawdada waana khasab inay ka waatoobaan falalka argagixisanimo ee ay geystaan. Ma aha oo kaliya inay joojiyaane, waa in ay natusaan in ficillada ay geystaan ay yihiin kuwa aad u xun.
AJ: Hadii ay taasi dhacdo ma laga yaabaa in maalin un la arko al-Shabaab oo ah Xisbi Siyaasadeed?
Sharmarke: Waxaan isleeyahay waxaa jiri kara tira aad u yar oo aan joojin doonin rabshadaha. Kuwaas wadada kaliya ee noo furan waa inaan joojinno oo burburinno. Cid kasta oo ka tanaasusha qaska, waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno.
AJ: dadkiaasi siyaasadda way soo gali karaan sow maha?
Sharmarke: waxaa jiraya geedi socod iyo hannaan ay siyaasadda kusoo gali karaan. Waa inay isbadal xooggan la yimaadaan.
AJ: Hal cod iyo hal qof ayay xukuumadaadu ballanqaaday doorashada 2016 markii ay xukunka la wareegtay. Laakiin gacan kuma haysaan dalka oo dhan. Sidee qof walba u codeyn karaa?
Sharmarke: Degmooyinka ay Al Shabaab maamulaan waa kuwa aad u yar. Dalka intiisa badan dawladda ayaa gacanta ku heysa. Waxaan rajeyneynaa in 2016 degmooyinka oo dhan ay soo galaan gacanta dawladda.
AJ: Guulo badan oo aad al-Shabaab ka gaarteen waxaa looga mahdinayaa ciidamada Afrikaanka ah (AMISOM) oo ka kooban 20, 000 oo askari. Goorma ayaad rajeynaysaa in ciidamadan shisheeye ay dalalkooda ku laabtaan?
Sharmarke: Run ahaantii ma aha AMISOM oo kaliya waxa guulahan gaaray. Waxaa sidoo kale keenay ciidamadeenna qalabka sida. Aad baan ugu mahadnaqeynaa taageerada AMSIOM. Walaalaheen waxa ay noo qabteen shaqo culus. Sidoo kale ciidamadeenna ayaa hawl wanaagsan qabtay si ay u xoreeyaan degmooyinka dalka. Waxaan ku jirnaa laba waji oo ah; kow inaan joojinno, deetana burburinno al-Shabaab. Laba inaan dhisno ciidan qaran. Markaan ku guuleysanno arrimahaas, kadib waxaan dhimeynaa ciidamada AMISOM.
AJ: Goormaad isleedahay taasi way dhici kartaa?
Sharmarke: waxaan isleeyahay geeddi socodkaas wuxuu bilaabmi karaa 2016/2017.
AJ: Billowgii wareysigan waxaad sheegtay dad badan inay sawir khaldan ka haystaan Soomaaliya. Dad badan ayaa waxa ay ka fikiraan qas iyo rabsho, waxey ka fikiraan al-Shabaab, waxa ay ka fikiraan burcad-badeed. Sidee dareentaa ka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ahaan hadiiba aad ogaatay in dadkii ay sidaa dalkaaga ka aaminsanyihiin?
Sharmarke: waxaan isleeyahay Soomaaliya oo kaliya ma aha waxa mushkiladaha noocani ah ay ka jiraan. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan iraahdo Soomaaliya way ka gudbeysaa waxyaabahaas oo idil. Burcad-badeednimada waxa ay hoos u dhacday 90%. Ma jirin falal burcad oo sanadkii tagay dhacay. Argagixisanimada hoos ayay usii dhaceysaa. Dhulka intiisa badan haatan gacanta dawladda ayuu ku jiraa. Marka lala barbardhigo dalalka qaar sida Suuriya, Liibiya iyo Afghaanistan, Soomaaliya waa dalka kaliya ee guulo ka gaaray argagixisnimada.
AJ: Waxaad ku nooleyd Mareykanka sanado badan. Sideed u aragtaa qaabka Soomaaliya looga soo bandhigo dhaqamada reer Galbeedka iyo aflaanta Hollywood-ka? Tusaale filimadii Black Hawk Down, Captain Phillips iwm.
Sharmarke: Taasi waa sababta aan dalkeyga u imid si aan sheekooyinkaas u badalo. Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay shaqo iyo ganacsi. Way ka gudubtay in wararka laga sheego ay u bataan burcad-badeednimo iyo argagixisanimo. Waxaa jira malaayiin Soomaali ah oo noloshooda si caadi ah u wata. Waxaan isleeyahay dalku dib-u-dhis ayaa ku socda, Soomaalida intooda bandanna waxa ay go’aansadeen in qof walba dhankiisa uu ka qabto wax walba oo uu noloshiisa ku hagaajinaayo.
Waxaan filayaa in wararka laga tabinaayo dalka dhinaca wanaagana laga eego. Dalku waa ka gudbay in laga sheego waxyaabaha xun oo kaliya. Aduunka waa in uu haatan ku eegaa Soomaaliya indha ka duwan kuwii hore.
Wareysigan waxaa qaaday Barry Malone oo ah Tifaftiraha Bogga Al Jazeera English, waxaana idiin turjumay Wargeyska Xaqiiqa Times. Kala soco warar, faallooyin iyo falanqeyn barteenna Internet-ka. Xaqiiqa Times waa Xarunta Xogaha Dahsoon iyo Xaqiiqooyinka.
Previous articleDanjiraha Norway ee Soomaaliya oo Warqadaha Aqoonsiga laga Gudoomay
Next articleInterview: Somalia PM says ready for business